Matipi eedu ecommerce kutengesa katalog | ECommerce nhau
Matipi eedu ecommerce kutengesa katarogu
Iwo makatalogu ezvitoro zvemagetsi ndeimwe yemidziyo mikuru yekukwezva kutarisa kwevatengi vedu, saka pane zvimwe zvinhu zvatinofanira kuteerera kuti tiite katarogu yedu inokwezva maziso uye zvakanyanya kushanda kune vatengi vedu.
1 Makomodhi akakwana
2 Tsika katarogu
Mubvunzo wekutanga wekufunga ndewe catalog umo zvigadzirwa zvedu zvinorairwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi vedu.
Saka apo paine zvimwe catalog yatogadzirwa Izvo zvakakosha kuti titarise kana paine zvimwe zvigadzirwa izvo, nekuda kwehunyanzvi hwadzo, izvo zvisiri zvechikamu chimwe chete, asi izvo nekuda kwekushanda kwavo zvinogona kuenderana nezvimwe zvigadzirwa.
Nenzira iyi tinogona kupa mutengi wedu kwete chete sarudzo ye tenga chigadzirwa, asi zvakare avo vanoiwedzera, vachitora yepamhepo chigadzirwa chitoro cheiyo imba yekushongedza Tinogona kusanganisa tafura yekudyira nejira repatafura kana nechimwe chigadzirwa, kuitira kuti nenzira iyi mutengi ave nechengetedzo yakakwana.
Sarudzo inotevera ndeye ichatibatsira zvakanyanya zvirinani kushandira vatengi vedu, zvisinei, iyi sarudzo inoda imwe nhanho yezvivakwa, saka ngatitarise izvi tisati taronga kuzviita muchitoro chedu chepamhepo.
Kana vatengi vedu vari vatsva, isu hatina imwe sarudzo kunze kwekuvaratidza zvese zvedu chigadzirwa mhandoNekudaro, nekufamba kwenguva zvinokwanisika kuti vatengi vedu vanofarira kuwana zvigadzirwa zvitsva, kwavari zvingave zviri nyore kuti peji redu riwane kugona kuchengetedza a nhoroondo yekutsvaga, uye nezvekutenga kwevatengi vedu kuitira kuti tibudise katalog iyo inomhanyira kune zvinodiwa nevatengi vedu.
Iyi sarudzo haingopi chete zvirinani kutarisa kumutengi wedu, zvichatibvumidzawo kuti tiwedzere kutengesa kwedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Matipi eedu ecommerce kutengesa katarogu
Kuchengetedzwa kwevatengesi veecommerce ndiko kwakanyanya kukosha
Basa revatengi mu e-commerce